Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Feno lavadavaka ny sehatry ny cyber eto amin'ny Internet
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fandikana data dia mety hiteraka vokan'ny domino amin'ny fikambanana maro amin'ny alàlan'ny fampiasana indray ny mari-pahaizana amin'ny kaonty manokana sy orinasa.
Orinasa indostrian'ny fandraisam-bahiny dia tsy manana afa-tsy 29% tenimiafina tokana.
Ny fampiasana indray ny teny miafina dia olana goavana izay miteraka fandrahonana lehibe.
Raha misy teny miafina iray manimba, ny kaonty hafa rehetra dia atahorana ihany koa.
Miady amin'ny tenimiafiko ny mpiasan'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, hoy ny tatitry ny indostria vaovao. Anisan'ireo indostrian'ny fikarohana 17, ny mpiasan'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia nampiasa matetika ny anaran'ny orinasany ho teny miafina matetika. Raha tokony ho tonga miaraka amin'ny teny miafina be pitsiny hiarovana ny kaontin'ny orinasan-dry zareo dia mametraka ny anaran'ny orinasany ho tenimiafiny fotsiny ny olona.
Ho fanampin'izay, ny orinasan-tseraseram-pitsaboana dia tsy manana afa-tsy 29% amin'ny tenimiafatra tokana. Midika izany fa mihoatra ny roa ampahatelon'ny mpiasa mampiasa indray ny teny miafiny amin'ny kaonty.
Ny fampiasana indray ny teny miafina dia olana goavana izay miteraka fandrahonana lehibe ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa. Raha misy teny miafina iray manimba, ny kaonty hafa rehetra dia tandindomin-doza koa, mampitandrina ireo manampahaizana momba ny fiarovana.
Ny fikarohana dia nanambara ihany koa ny tenimiafina 10 ambony mahazatra indrindra ampiasain'ny mpiasan'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. Ny manaitra, ny mahazatra indrindra dia ny "teny miafina".
Ireto ny tenimiafina 10 ambony amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny:
Anaran'ny orinasa 1 *
anaran'ny orinasa1 *
Ny mpikaroka dia nanadihady angona avy amin'ny fanitsakitsahana ny antoko fahatelo izay nisy fiantraikany tamin'ny orinasa Fortune 500. Raha fintinina dia nahitana fanitsakitsahana 15,603,438 ny tahirin-kevitra ary nozaraina ho indostria 17 samy hafa. Ny mpikaroka dia nijery ireo tenimiafina 10 ambony ampiasaina amin'ny indostria tsirairay, ny isan-jaton'ny tenimiafina tokana ary ny isan'ny fandikana data misy eo amin'ny indostria tsirairay.